Sorona Masina ny 15/01/2019 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 15/01/2019
1 Sam. 1, 9-20
Nohenoin’ny Tompo vavaka i Annà ka niteraka an’i Samoela.
Tamin’izany andro izany, nony avy nihinana dia nitsangana i Annà. I Helî mpisorona izany, nipetraka teo amin’ny fipetrahana anankiray, teo anoloan’ny anankiray amin’ny tsatokazon’ny tempolin’ny Tompo. Fo vontom-pahoriana no nivavahan’i Annà tamin’ny Tompo, ary nipotrapotraka ny ranomasony; ary nivoady izy nanao hoe: “Tompon’ny tafika ô, raha mba mitsinjo ny fahorian’ny ankizivavinao ianao, raha mahatsiaro ahy ka tsy manadino ny ankizivavinao, ka manome zazalahy ny ankizivavinao dia homeko ho an’ny Tompo izy, amin’ny andro iainany rehetra, ary tsy hokasihin-kareza ny lohany.” Naharitra ela no nivavahany teo anatrehan’ny Tompo ka nodinihin’i Helî ny vavany. Fa niteny anakampo i Annà, ka ny molony fotsiny no nihetsiketsika, fa ny feony tsy re akory. Noheverin’i Helî fa mamo izy. Dia hoy izy taminy: “Mandra-pahoviana ianao no ho mamo? Mampisavà ny hamamoana avy amin’ny divainao.” Fa hoy i Annà: “Tsia, tompoko, fa vehivavy ory ao am-po aho, tsy nisotro divay na fisotro mahamamo aho; fa mamboraka ny ato am-poko eto anatrehan’ny Tompo. Aza mihevitra ny ankizivavinao ho olon’i Beliala fa ny hamafin’ny alahelo amam-pahoriako no nitenenako mandraka ankehitriny.” Dia niteny indray i Helî ka hoy izy: “Mandehana amim-piadanana, ary hohenoin’Andriamanitr’i Israely anie ny vavaka nataonao taminy.” Ka hoy izy: “Hahita fitia aminao anie ny ankizivavinao.” Dia lasa nizotra ny lalany ravehivavy, dia nihinana izy ary niova ny tarehiny. Ary nifoha maraina koa izy ireo, ka nony avy niankohoka teo anatrehan’ny Tompo, dia nody izy, ka niverina tany an-tranony any Ramà. Ary i Elkanà nahalala an’i Annà vadiny, ary ny Tompo nahatsiaro azy. Ary nony nitsingerina ny andro, dia efa nanana anaka i Annà ka dia tera-dahy izy, ary nataony hoe Samoela ny anarany, fa nangatahiko tamin’ny Tompo, hoy izy.
1 Sam. 2, 4-5. 6-7. 8abde.
Fiv.: Ravo amin’ny Tompo ny foko.
Endrey ny hafaliako manana ny Tompo. Ny lohako mitanondrika mitraka. Ka indro aho misoka-bava hiaro tena. Mifaly aho, ry Tompo, fa voavonjinao.
Ny olo-mahery tapaka tsipîka, ny osa kanefa miatrana amin-kery. Ny voky nasainy miasa mikarama, ny noana kanefa homana tsy miasa; ny momba nomeny zanaka amam-para, kanefa ny maro anaka malazo.
Mamono ary koa mamelona ny Tompo, mampidina sy mampakatra ny maty. Mampanana sy mandevona ny Tompo, mampietry Izy fa manandratra avy hatrany.
Alàny tsy ho eo am-bovoka ny ory, akariny avy eo am-pako ny mahantra. Ka indro nomeny toerana mpanjaka, tolorany fiketrahana mihaja.
Heb. 2, 5-12
Mendrika Azy ny handavorary ao amin’ny fijaliany Ilay iavian’ny famonjena.
Tsy mba Anjely no nametrahan’Andriamanitra eo ambaniny izao fiainan-ko avy lazainay izao. Fa amin’ny andininy anankiray any ho any misy koa filazana manao hoe: “Inona moa ny olombelona no ahatsiarovanao azy; ary izay zanak’olombelona no amangianao azy? Nataonao ambany vetivety noho ny Anjely izy; dia nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana ary napetrakao ambonin’ny asan-tananao, ka nataonao eo ambany tongony ny zavatra rehetra.” Raha nametraka ny zavatra rehetra teo ambaniny Izy, dia tsy nisy zavatra navelany tsy eo ambaniny mihitsy. Fa izao anefa tsy mbola hitantsika: natao ambaniny avokoa ny zavatra rehetra; fa Ilay natao ambany vetivety noho ny Anjely, dia Izy Jesoa no hitantsika nosatrohana voninahitra sy fiandrianana noho ny fahafatesana niaretany; fa noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia nanandrana ny fahafatesana mba hamonjy ny olombelona rehetra Izy. Fa mendrika an’Ilay antony sy fototry ny zavatra rehetra, izay mitondra zanaka betsaka ho any amin’ny voninahitra, ny nandavorary ao amin’ny fijaliana Ilay iavian’ny famonjena an’ireo. Satria fototra iray ihany no niavian’izy rehetra, na ny manamasina na ny hamasinina, hany ka tsy mahamenatra Azy ny miantso azy ireo hoe rahalahy, araka ny teniny hoe: “Hitory ny Anaranao amin’ny rahalahiko Aho, hankalaza Anao eo afovoan’ny Eglizy Aho.”
Salamo 8, 2a sy 5. 6-7. 8-9.
Fiv.: Ny asan-tananao nomenao hanjakan’ny Zanakao.
Intý aho hihira ny fiandriananao ambony sy madera manoatra noho ny lanitra. Fa inona ny olona no mba tsiahivinao? Ny zanak’olombelona, he tsimbininao!
Fa lasa ambany kely noho Andriamanitra izy, heni-boninahitra izy nasondrotrao. Ny asan-tananao foinao hozakainy, ny zavatra rehetra eo ambany fiadidiany.
Dia omby aman’ondry omban’ny bibidia, ny biby izay mandady sy mandia izany tany. Ny vorona eny an-danitra sy trondron-dranomasina izay miriaria sy mifaly eny ambony onja.
Nampianatra azy ireo, toy ny manana fahefana Izy.
Indray sabata, raha tonga tao an-tanànan’i Kafarnaôma i Jesoa sy ireo nanara-dia Azy, dia niditra tao amin’ny sinagôga, ary nampianatra azy ireo Izy. Dia gaga izy ireo tamin’ny fampianarany, satria nampianatra azy toy ny manana fahefana Izy, fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna. Ary tao amin’ny sinagôgany, dia nisy lehilahy anankiray azon’ny fanahy maloto, ary niantso mafy izy nanao hoe: “Mifampaninona izahay sy Ianao, ry Jesoa avy any Nazareta? Tonga hampahita loza anay va Ianao? Fantatro raha Ianao, dia ilay Masin’Andriamanitra.” Fa nandrahona azy i Jesoa nanao hoe: “Mangina, ary mivoaha amin’io lehilahy io.” Ary ny fanahy maloto nampifanintontsintona azy, dia niantso tamin’ny feo mahery ka nivoaka taminy. Gaga ny olona rehetra ka nifampilaza hoe: “Inona itý? Fampianarana vaovao inona re itý? fa ny fanahy maloto avy no didiany ka manaiky Azy.” Dia niely eran’i Galilea rehetra ny lazany.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0656 s.] - Hanohana anay